Tari-dalana an-tariby avy amin'ny seminera amin'ny tranokala tranonkala
Mitombo isan'andro ny data sy ny fampahalalana ao amin'ny tranonkala. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa an'i Google ho loharanom-pahalalana voalohany, na mikaroka hevitra momba ny orinasa izy ireo na miezaka hahatakatra ny fe-potoana vaovao.
Miaraka amin'ny habetsahan'ny angon-drakitra hita ao amin'ny tranonkala, dia manokatra fahafahana be dia be ho an'ny mpahay siansa ny Data. Mampalahelo fa tsy mora ny ankamaroan'ny angona ao amin'ny tranonkala. Natolotra azy io amin'ny endrika tsy noforonina antsoina hoe format HTML izay tsy azo ampiasaina. Noho izany dia mitaky ny fahalalana sy ny fahaiza-manaon'ny mpahay siansa ny fampiasana izany.
Ny fanasitranana ny tranonkala dia ny dingan'ny fampivoarana ny tahiry hita ao amin'ny format HTML ao anaty rafi-dalam-pamokarana izay mora azo sy ampiasaina. Ny fiteny rehetra dia azo ampiasaina amin'ny tranokala iray. Na izany aza, amin'ity lahatsoratra ity, dia hampiasa ny fiteny R izahay.
Misy fomba maro ahafahana manangona angona azo avy amin'ny tranonkala. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ahitana:
1. Ny kopia maha-olombelona
fomba fanao mahazatra sy mahafa-po ny manaparitaka angona avy amin'ny tranonkala.
Ity fomba iray hafa tsotra nefa mahery vaika handraisana fampahalalana avy amin'ny tranonkala iray. )
Maro amin'ireo tranonkala toy ny Twitter, Facebook, LinkedIn, sns ... dia manome anao API na ampahany manokana izay mety ho antsoina amin'ny fampiasana code etsy mba ahafahana manangona angona ao amin'ny format voatokana.
Mariho fa ny programa sasany dia afaka mamerina ny votoatim-pirazanana maoderina namboarin'ireo scripts client-side. Azo atao ny manadihady pejy ao amin'ny hazo DOM izay mifototra amin'ny programa azonao ampiasaina mba handraisana ampahany amin'ireto pejy ireto. )
Alohan'ny hidirana ao amin'ny tranokala R, mila manana fahalalana fototra momba ny R. Raha vao manomboka ianao, dia misy loharano lehibe maro izay afaka manampy. Ankoatra izany, takiana amin'ny fahalalana HTML sy CSS ianao. Na dia izany aza, satria ny mpahay siansa momba ny angona dia tsy dia mahalaza loatra ny fahaizana ara-teknika momba ny HTML sy CSS, afaka mampiasa rindrambaiko misokatra toy ny Selector Gadget ianao.
Ohatra, raha manangona angon-drakitra ao amin'ny tranonkalan'ny IMDB ho an'ireo horonantsary 100 malaza indrindra navoaka tamin'ny fe-potoana voatondro, ianao dia tokony hanodina ireto angon-drakitra manaraka ireto avy amin'ny tranonkala iray: famaritana, fotoana lavalava, genre, fanamarihana, vato , vola mendrika, tale sy halefa. Vantany vao nosakananao ny angona, dia azonao atao ny mamakafaka izany amin'ny fomba samihafa. Ohatra, afaka mamorona andian-tsary mahaliana ianao Source . Ankehitriny rehefa manana hevitra ankapobeny momba ny fanakanana ny angon-drakitra ianao dia afaka manao ny manodidina anao!